Barnaamijka Qasnadda Qaranka ee Puget Sound - Biyo Isku-dhafan iyo Qorsheynta Duufaanta
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Maareynta Kobaca|Mawduucyada Maareynta Kobaca|Barnaamijka Gurmadka Qaranka ee 'Puget Sound'
Waaxaha Ganacsiga iyo Ecology ee Gobolka Washington ayaa isku duba ridaya dadaalkooda ilaa iyo 2011 si kor loogu qaado habab qorshayn ku saleysan Biyo-qabatin oo ku saabsan horumarinta iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga. Maalgelinta waxaa lagu hagaajiyay inay taageerto kooxo badan oo maxalli ah, qabaa'il ah, iyo kuwa aan macaash doon ahayn si loo hagaajiyo natiijooyinka deegaanka ee Puget Sound. Laga soo bilaabo sanadkii 2016 wakaaladuhu waxay la shaqeynayaan Xarunta Washington State University Stormwater si kor loogu qaado qaababka isku dhafan ee Qorshaha Stormwater iyo Land Land, waxayna lashaqeynayaan wada-hawlgalayaasha kale ee federaalka, gobolka, maxalliga ah iyo Qabyaaladda si kor loogu qaado mudnaanta gobolka iyo maalgelinta Waxqabadyada Muddada dhow si loo soo celiyo Puget Sound .
Dhisida Magaalooyinka Cagaaran
Buugga Tilmaamaha ee Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington: Dhiirrigelinta Horumarinta Saamaynta Yar (LID) ee Ka Baxsan Shuruudaha Ogolaanshaha waxay soo bandhigaysaa qaabab ay dawladaha hoose ugu dhiirrigelin karaan horumariyeyaasha inay si iskood ah ugu darsadaan LID mashaariicda xarumaha kobcinta magaalooyinka. Iyadoo la adeegsanayo talooyinka wareysiyada, guddiga la talinta mashruuca, iyo cilmi baarista suuqgeynta bulshada, waxaan qiimeynay caqabado la dareemay iyo dhiirigeliyayaal horumarineed, waxaana ka faa'iideysanay cilmi baaristaan ​​si aan u siino hagitaan iyo siyaasado ka caawiya dowladaha hoose dhiirigelinta dhiirrigelinta. Buug-tilmaameedka waxaa ku jira aalado iyo qalab fidin ah oo ay dawladaha hoose ka faa'iideysan karaan si loogu dhiirrigeliyo horumariyeyaasha inay ka gudbaan shuruudaha jira ee biyaha roobka oo ay ku jiraan xaashiyaha xaqiiqda ee hababka maamulka ugu fiican iyo barnaamijyo dhiirrigelin kala duwan ah.
Xaqiiqda dhabta ah
Mashruucyada biyo-shubeen ee Ganacsigu waxaa ka mid ah ka shaqaynta:
• kor u qaadista Isbahaysiga Gobollada si loo hagaajiyo qorshaynta xudduudaha, iyadoo diiradda la saarayo qaababka gobolka ee looga hortagayo yareynta daadadka.
• Khariidaynta Codka Puget si loo muujiyo qaababka horumarka ee hadda la filayo iyo sida ay u saameyn ku yeelan karaan caafimaadka deegaanka ee gobolka
Mashaariicda Stormwater waxaa ka mid ah qorshaynta dib-u-habeyn ku saleysan Biyo-biyoodka, iyo sidoo kale sameynta Istaraatiijiyooyin cusub oo fulin ah oo loogu talagalay hagaajinta caafimaadka qulqulka biyaha iyo yareynta saameynta sunta wasakhda ee kalluunka
Fadlan eeg bogga internetka ee Ecology Mashruuca Astaamaha Biyo Bixiyaha Puget iyo websaydhka Ecology Mawduucyada Biyaha - Duufaanta wixii faahfaahin dheeraad ah.
Natiijooyinka iyo Guusha:
Waxaan gacan ka geysatey horumarinta iyo adeegsiga yoolalka loogu talagalay Ajandaha Waxqabadka Puget Sound
20 deeqo oo la siiyay dawladaha hoose iyo hal qabiil si wax looga qabto arrimaha qorshaynta
Oggolow Mashruuca Xogta Wajiga 2 oo lagu dhammaystirayo Khariidadda aagag isku-dhafan oo Muuqaal ah iyo aagagga horumarinta ee la beegsanayo
Isbahaysiga Gobolladu wuxuu taageeraa ururrada isku-dhafan ee maxalliga ah ee gobollada Kitsap, Pierce iyo King illaa iyo hadda. Diirad saarida hada waa maaraynta gobolka Stormwater si loo taageero dadaallada isdabamarinta magaalooyinka.